UMTHANDAZO WOKUNGCWELE U-ANTONIO DE PADUA UKUFUMANA UTHANDO
Ufuna ukwazi a Umthandazo kuSanta Anthony wasePadua ukuba abuyise uthando, inamandla kwaye iyasebenza, kwaye ivumela ukubuya kwalomntu umthandayo, kule posi sikunika umthandazo omangalisayo wokufezekisa lo mnqweno mkhulu.
1 Umthandazo kuSanta Anthony wasePadua ukuba abuyise uthando
1.1 Umthandazo onamandla wokufumana uthando kwakhona
1.1.1 Ngubani uSanta Anthony wasePadua?
USanta Anthony wasePadua, ungcwele onwabela ubabalo lokuba ngummangaliso, ngakumbi xa kuziwa kwimicimbi yothando.
Kwimeko apho unengxaki yokuphulukana nothando olungenakwenzeka kwaye ufuna ngentliziyo yakho yonke ukubuyisa lowo umthandayo, kuya kufuneka ubongoze le ngcwele ngokholo nokuzinikela kulo mthandazo ulandelayo, kwaye ngokuqinisekileyo uya kuba nakho ukuphinda ufumane amaxesha okonwaba kwakhona ngokubuya kothandekayo.
Umthandazo onamandla wokufumana uthando kwakhona
"Inkulu kwaye inobungangamsha iSan Antonio"
"Ukuba unyulwe nguThixo ukuba usincengele iimfuno zethu"
"Ukubandezeleka kunye namaxesha okuphelelwa lithemba ngobutyebi bezinto zethu"
"Ukuba balahlekile, ngalo mzuzu ndiza kubukho bakho nabo bonke"
"Ukuthobeka ukuze undincede ndisombulule ingxaki endindikhathazayo"
"Iyandingcungcuthekisa kwaye ndiyophule intliziyo yam."
"Owu, u-Saint Anthony ozukileyo nothandekayo usikelelwe, onobabalo lokukhusela nokuzalisa abantu ngothando"
"Ndiyakubongoza ngako konke ukuthobeka ungenelelo lwakho"
"Ukundinceda kumanyano kunye noxolelwaniso (yitsho igama lomntu omthandayo) kunye nelakho."
"USanta u-Anthony usikelelekile, ndiyakucela ukuba unyamalale kwingcinga yakhe"
"Nasiphi na isenzo sokuthandabuza, ukungathembani, umona, umsindo, ukohlwaya kunye nokukhathazeka"
"Baxhokonxa ukwahlukana kwaye umzuzu ngamnye usahlula ngakumbi"
"Beka kwiingcinga zakho onke amaxesha okonwaba kunye neenkumbulo ezintle"
"Ukuba sihlala kunye, nokuba sibeke ecaleni ikratshi lakhe, ukuba bonke balahliwe"
"Izizathu zokwahlukana kwethu"
"Vumela ukuba ikhulelwe luthando oluyinyani ebesiluva kwaye sizinika yonke imihla."
“Wena unomsebenzi wokufumana izinto ezilahlekileyo, nge
Indlela enqamlezileyo efumanayo (yitsho igama) ”.
"Wena ukuba izindululo ezilahlekileyo egameni lakho zilahlekile kwaye zamkelwe"
Ndiyakucela ukuba uthethelele ukuze (utsho igama lomntu)
yamkela eyam kwakhona.
"Wena, ogcwalisa izibini ngoxolo nokuzola"
“Ndinike ubabalo loxolelaniso kunye nobabalo lokuvisisana
kunye (yitsho igama) ”.
"U-Saint Anthony, ingcwele enamandla kunye nommangaliso eluthandweni"
"Ndifuna ubukho bakho, nceda uze kundinceda"
"Ndicela uncedo lwakho, khusela ubudlelwane bethu nokhuseleko lwakho"
"Sukuvumela abantu besithathu ukuba bathintele uthando lwethu"
"Loyikisa (igama lomntu) zonke iingcinga kunye nabo bazihlulayo kum"
"Ndisindise, ndiyakucela ngomphefumlo wam nangentliziyo yam yonke"
"Ngalo mzuzu unzima endihamba nawo kwaye ndifuna ukusombulula ngokungxamisekileyo"
"Ndenzele inceba (yitsho ubabalo olufunekayo ukufezekisa, ubeke umnqweno wakho ngokholo namandla)"
"Ndiyakucela sithandwa San Antonio, ukuba ujoyine, thanda ngothando lwakho"
"Imiphefumlo yethu kunye neentliziyo zethu ukuze zihlale zimanyene ngonaphakade, ngokungathi yintliziyo enye"
"Sukuvumela nabani na ukuba abe namandla okusahlula."
"Saint Anthony, ingcwele ethandekayo, sukusihoya isicelo sam nethemba lam"
"Ngumthandazo ongenakwenzeka kuwe, kwaye ukuthanda kwakho kuyafikeleleka."
"Ndicela ukubakho kwisicelo sam esibuhlungu"
"Mamela ilizwi lam elibuhlungu, ndincede ndisombulule kungekudala."
"U-Saint Anthony, igama elihle kunye nesenzo, ingcwele yemimangaliso engenakwenzeka"
"Ngcwele yeentsikelelo, kubo bonke abafuna uncedo lwakho, egameni lakho"
"Ngokholo bancede, ndibeka lonke ukholo lwam nethemba lakho kuwe"
"Yenza uthando (utsho igama lomntu) libuyele kum, nceda ungenelele kule mbandezelo"
"Ngamana, enkosi ngokuqonda kwakho okukhulu, uviwe kwaye undinike into endiyilangazelela ngokusuka entliziyweni yam kunye nesidingo sam."
"Egameni likaYesu Krestu, uMsindisi wethu."
Ubuqaqawuli obuthathu, abathathu ooBawo wethu kunye noThathu Bhokelani ooMariya. Umthandazo kufuneka wenziwe ngokholo olupheleleyo kwiintsuku ezilithoba eziqhubekayo.
Ukuba uyifumene le posi ithetha nge Umthandazo ku-Saint Anthony wasePadua ukuba abuyise uthandoSiyakumema ukuba ufunde inqaku lethu: Umthandazo weSan Antonio wokutshata - uMlingisi oMangalisayo weMidlalo.
Ngubani uSanta Anthony wasePadua?
USanta Anthony wasePadua, wayeyindoda ezinikele ekushumayeleni ilizwi likaThixo, wazalelwa eLisbon, ePortugal, xa lo mmandla wawuyinxalenye yeSpain ngonyaka we-1.195 AD. Wabhaptizwa ngegama likaFernando de Bulhôes Taveira.
Unyana kaMartim de Bulhôes noTeresa Taveira, owayenesikhundla esiphezulu kwezoqoqosho, abazali bakhe bagcina umnqweno wokuba abe lilungu loluntu olukhulu, kodwa, entliziyweni yakhe yayiluthando olungenakulinganiswa ngoKristu, awathi waya kulo amaFranciscans.
Emva kokumiselwa njengoFranciscan, wathunyelwa njengomthunywa wevangeli kwizixeko ezininzi zase-Itali naseFrance, phakathi kwempumelelo yakhe wakwazi ukuguqula abantu abaninzi abanesono ngomzekelo wakhe omkhulu.
Ibali lalo mmangaliso ungcwele uxela ukuba, xa wayethandaza egumbini lakhe, kwavela umntwana uYesu kuye, owabeka izandla zakhe ezibuthathaka nezithambileyo entanyeni yakhe wamanga.
U-Anthony u-Anthony wayenovuyo lokufumana olu lubabalo lukhulu kuba wayehlala enomphefumlo wakhe ukhululekile esonweni kwaye wayemthanda uYesu.
Ngenxa yokugula, wangena kumzi woonongendi emaphethelweni esixeko sasePadua, esweleka eneminyaka engama-36, ngaloo mini inguJuni 13, unyaka we-1.231.
Ixesha elingaphezulu, kanye kwiminyaka engamashumi amathathu anesibini, intsalela yakhe yathathwa yasiwa ePadua, ulwimi lwakhe lwalugcinwe luqinile, aluzange lubonakalise zimpawu zokonakaliswa kukubola. Emva kokufa kwakhe, imimangaliso eyahlukeneyo yaqala ukubonakala.
Ummangaliso wakhe wokuqala owaziwayo wayekwisixeko sasePadua e-Itali, inkwenkwana egama linguLeonardo, ikhathale ngumama wayo xa enomsindo.
Indlela azisola ngayo ngalo msitho, waya eSan Antonio wayokuvuma impazamo yakhe enkulu, awathi kuyo umshumayeli:
"Unyawo lomntu okhaba umama wakhe ufanele ukunqunyulwa."
Umfana uLeonardo, enxunguphele kakhulu, wagoduka wanqumla unyawo, u-Anthony u-Anthony xa eva ngokwenzekileyo, wabamba isiqwenga sonyawo olucinyiweyo kwaye ngokungummangaliso waqhotyoshelwa emzimbeni ngaphandle kokushiya umkhondo.
Ukubekwa kwakhe njengongenisiweyo, yenye yezona zikhawulezayo kwimbali yabangcwele, yaqhutywa nguPopu Gregory, emva konyaka wokufa kwakhe ngePentekoste ngoMeyi 30, 1.232.
Umntu waseFranciscan ogama linguSanta Bonaventure wakha wathi:
"Yiya ngokuzithemba kuAntonio, onobabalo lokwenza imimangaliso, kwaye uya kukufumanela le nto uyifunayo."
La Umthandazo ku-Saint Anthony wasePadua ukuba abuyise uthandoInamandla kwaye idibanisa imiphefumlo yabathandi kwakhona, kwaye le ngcwele iboniswa kwimifanekiso ephethe usana olunguYesu, eneenyibiba, okanye incwadi, okanye bobathathu ezandleni zakhe.